Adɛn Nti na Ɛsɛ sɛ Woyɛ Bible Mu Nhwehwɛmu? | Nkɔmmɔ
KENKAN WƆ Acholi Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Aymara Bicol Bislama Bulgarian Cakchiquel (Western) Cambodian Catalan Cebuano Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Chiyao Chokwe Chuvash Cibemba Cinyanja Croatian Czech Danish Drehu Dutch Efik English Estonian Ewe Finnish French Ga Garifuna Georgian German Greek Guarani Haitian Creole Hausa Hebrew Hiligaynon Hungarian Icelandic Igbo Iloko Indonesian Isoko Italian Japanese Kazakh Kikamba Kikaonde Kikongo Kikuyu Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Kongo Korean Kwanyama Latvian Lingala Lithuanian Luganda Luo Luvale Macedonian Malagasy Mam Maya Mazatec (Huautla) Mixe Mongolian Myanmar Nahuatl (Central) Nahuatl (Huasteca) Nahuatl (Northern Puebla) Ndebele Ndonga Nepali Ngabere Norwegian Nzema Oromo Ossetian Otetela Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Polish Portuguese Quechua (Bolivia) Romanian Runyankore Russian Sango Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Shona Silozi Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swedish Tagalog Tahitian Tatar Thai Tigrinya Tiv Tlapanec Tok Pisin Totonac Tshiluba Tsonga Tswana Turkish Tuvaluan Twi Tzotzil Ukrainian Umbundu Venda Vietnamese Wallisian Waray-Waray Wolaita Xhosa Yoruba Zapotec (Isthmus) Zulu
Nkɔmmɔ a ɛdi so yi yɛ nkɔmmɔ a Yehowa Adansefoɔ taa ne nkurɔfoɔ bɔ no bi. Ma yɛmfa no sɛ Ɔdanseni bi a wɔfrɛ no Ben ahyia ɔbarima bi a wɔfrɛ no Eric.
BIBLE YƐ ABAKƆSƐM NWOMA A EDI MU
Eric: Me deɛ m’ani nnye nyamesom ho, enti mennye nni sɛ yɛbɛtumi abɔ nkɔmmɔ biara.
Ben: Medaase sɛ woama mahunu saa. Oo, mammɔ me din mpo. Wɔfrɛ me Ben, na wo nso ɛ?
Eric: Me nso mede Eric.
Ben: Eric, m’ani agye sɛ mahyia wo.
Eric: Me nso saa ara.
Ben: Wei deɛ ma me mmisa wo, wɔtetee wo abusua a wɔyɛ nyamesomfoɔ mu?
Eric: Aane. Nanso berɛ a mekɔɔ kɔlege no, mede nyamesom too nkyɛn koraa.
Ben: Saa? Na dɛn na wosuaa wɔ sukuu?
Eric: Mesuaa abakɔsɛm ne asetena mu nsɛm. Sɛ mehunu nsɛm a ɛsisii yɛn nananom mmerɛ so a, m’ani gye.
Ben: Abakɔsɛm bɛtumi ama w’ani agye paa. Na wonim, Bible yɛ nwoma a abakɔsɛm ahyɛ mu mã. Ɛno nso, woyɛɛ mu nhwehwɛmu?
Eric: Oo dabi. Menim sɛ Bible yɛ nwoma pa, nanso ɛmmaa me tirim da sɛ ɛyɛ abakɔsɛm nwoma.
Ben: Mehwɛ a mɛtumi ne wo abɔ nkɔmmɔ. Sɛ wowɔ berɛ kakra a, mɛtumi akyerɛ wo nsɛm a ɛsisii ankasa a Bible ka ho asɛm no bi.
Eric: OK. Nanso menni Bible.
Ben: Ɛnyɛ hwee, mewɔ bi wɔ ha. Nea edi kan no wɔ 1 Berɛsosɛm ti 29, nkyekyɛmu 26 ne 27. Ɛhɔ ka sɛ: “Yese ba Dawid dii Israel nyinaa so hene; nna a ɔde dii Israel so hene no si mfeɛ aduanan. Ɔtenaa Hebron dii adeɛ mfeɛ nson, na ɔtenaa Yerusalem nso dii adeɛ mfeɛ aduasa mmiɛnsa.”
Eric: Ɛdeɛn na ɛma wogye di sɛ saa asɛm no yɛ nokorɛ?
Ben: Wo deɛ hwɛ oo, berɛ bi, ebinom kaa sɛ Ɔhene Dawid antena ase da.
Eric: Saa? Dɛn nti na na wɔnnye nni?
Ben: Ɛfiri sɛ na wɔnnyaa adanseɛ pii a ɛkyerɛ sɛ ɔtenaa ase ankasa. Bible nko ara na na aka ne ho asɛm. Nanso, afe 1993 mu no, wɔn a wɔtutu fam hwehwɛ tete nneɛma mu huu ɛboɔ dada bi a wɔatwerɛ biribi wɔ so. Sɛ wɔkyerɛ aseɛ a, ɛkyerɛ “Dawid Fie.”
Ben: Nhwɛsoɔ foforɔ bi ni. Bible san ka sɛ Yesu berɛ so no, na ɔhene bi wɔ hɔ a wɔfrɛ no Pontio Pilato. Ɔno nso, ebinom gyee akyinnyeɛ sɛ ɔnyɛ onipa a ɔtenaa ase ankasa. Bible no ka ne ho asɛm wɔ Luka ti 3, nkyekyɛmu 1. Wohwɛ ha a, wohu sɛ wɔabɔ ne din aka aban mpanimfoɔ a na wɔwɔ hɔ saa berɛ no ho.
Eric: Aah mahu. Ɛka sɛ: “Berɛ a na Pontio Pilato yɛ Yudea amrado [no], na Herode di Galilea mantam so.”
Ben: Mo! Woayɛ adeɛ. Yɛhunu sɛ Pontio Pilato yɛ obi a ɔtenaa ase ankasa, nanso nwomanimfoɔ bi gyee wei ho akyinnyeɛ mfeɛ bebree. Afei bɛyɛ mfeɛ 50 a atwam ni no, wɔhunuu ɛboɔ bi wɔ Mediterranea Apuei fam a na wɔatwerɛ ne din wɔ so.
Eric: Ei, wei deɛ mentee da.
Ben: Ɛyɛ me dɛ sɛ manya hokwan reka ho asɛm akyerɛ wo.
Eric: Sɛnea mekaeɛ no, menim sɛ Bible nso yɛ nwoma pa, nanso menwenee ho da sɛ ɛbɛtumi aboa yɛn nnɛ. Ebia ɛka nsɛm a ɛsisii no pɛpɛɛpɛ deɛ, nanso mennye nni sɛ mfasoɔ da so ara wɔ so.
BIBLE YƐ NWOMA A AKYƐ NANSO MFASOƆ WƆ SO NNƐ
Ben: Saa na nnipa pii ka, nanso me deɛ me ne wɔn nyɛ adwene. Nea enti a ɛte saa ne sɛ, ɛfiri yɛn nana Adam berɛ so bɛsi nnɛ, onipa ahiadeɛ nsesaeɛ. Yɛmfa biribi te sɛ aduane, ntadeɛ ne daberɛ nyɛ nhwɛsoɔ. Ɛmmaa da sɛ afei deɛ yɛnhia saa nneɛma no bio. Berɛ nyinaa yɛte nka sɛ ɛsɛ sɛ yɛne yɛn ho yɛn ho bɔ nkɔmmɔ, na yɛnya abusua a anigyeɛ wom. Ɛnte saa?
Eric: Ɛte saa paa.
Ben: Bible no bɛtumi aboa yɛn wɔ saa nneɛma yi nyinaa mu. Ɛwom, ɛyɛ nwoma a akyɛ, nanso mfasoɔ wɔ so ma yɛn nnɛ.
Eric: Wopɛ sɛ wokyerɛ sɛn?
Ben: Nea mepɛ sɛ mekyerɛ ni: Afotusɛm pii wɔ Bible mu, na ɛso wɔ mfasoɔ ma yɛn nnɛ sɛnea na ɛso wɔ mfasoɔ berɛ a wɔtwerɛeɛ no.
Afotusɛm pii wɔ Bible mu, na ɛso wɔ mfasoɔ ma yɛn nnɛ sɛnea na ɛso wɔ mfasoɔ berɛ a wɔtwerɛeɛ no
Eric: Ebi ne sɛn?
Ben: Wo deɛ yɛmfa biribi te sɛ sikasɛm, abusua asetena ne sɛnea yɛbɛtumi ayɛ adamfo pa nyɛ nhwɛsoɔ. Bible wɔ ne nyinaa ho afotusɛm ma yɛn, na emu afotuo bɛtumi aboa wo ama asi wo yie. Wonnye nni sɛ ɛnnɛ, ɛyɛ den sɛ obi bɛyɛ okunu pa anaasɛ ɔbɛyɛ n’asɛdeɛ sɛ abusua ti?
Eric: Nea woreka yi deɛ me ne wo yɛ adwene, ɛfiri sɛ me ne me yere aware bɛyɛ afe ni, nanso ɛtɔ mmerɛ bi a yɛn adwene nhyia wɔ nneɛma ho.
Ben: Saa pɛpɛɛpɛ. Nanso wonim, afotusɛm pii wɔ Bible mu a aseteɛ nyɛ den, na wode yɛ adwuma a ɛyɛ yie. Yɛmfa asɛm a ɛwɔ Efesofoɔ ti 5 nyɛ nhwɛsoɔ. Ma yɛnkenkan nkyekyɛmu 22, 23, ne 28. Wopɛ a wobɛtumi akenkan.
Eric: OK, mɛkenkan. Ɛhɔ ka sɛ: “Momma ɔyerenom mmrɛ wɔn ho ase mma wɔn ara wɔn kununom te sɛ deɛ wɔreyɛ ama Awurade, ɛfiri sɛ okunu yɛ ne yere ti, sɛdeɛ Kristo nso yɛ asafo no ti no, na ɔne nipadua yi agyenkwa.” Nkyekyɛmu 28 no nso ka sɛ: “Saa ara na ɛsɛ sɛ okununom dɔ wɔn yerenom sɛ wɔn ara wɔn nipadua. Deɛ ɔdɔ ne yere no dɔ ne ho.”
Ben: Woayɛ adeɛ. Wonnye nni sɛ sɛ okunu ne ɔyere nyinaa bom de saa afotuo yi yɛ adwuma a, wɔn awareɛ bɛsɔ?
Eric: Ɛwom saa, nanso ne ka deɛ ɛnyɛ den oo na ne yɛ ne asɛm no.
Ben: Ɛyɛ nokorɛ; yɛn nyinaa tɔ sini. Enti, Bible hyɛ yɛn nkuran sɛ yɛnna nteaseɛ adi. * Sɛ adamfofa bi bɛtumi agyina a, ɛnsɛ sɛ yɛtwe nsɛm tann; ɛsɛ sɛ yɛtumi gyaa nsɛm mu ma ɛka. Me ne me yere ahunu sɛ Bible bɛtumi aboa yɛn ama yɛayɛ saa.
Eric: Nteaseɛ wom.
Ben: Yehowa Adansefoɔ wɔ Wɛbsaet bi. Wokɔ hɔ a wobɛnya awareɛ ne abusua asetena ho afotusɛm pii. Sɛ wowɔ berɛ kakra a, mɛtumi akyerɛ wo emu bi.
Eric: Oh, mɛnya berɛ kakra ama wo.
Ben: Ok. Wɛbsaet no address yɛ www.jw.org/tw. Sɛ wobue a, ɛha na ɛbɛdi kan de wo aba.
Eric: Mfonini yi yɛ fɛ paa.
Ben: Ɛyɛ mfonini a ɛkyerɛ sɛnea Yehowa Adansefoɔ yɛ asɛnka adwuma no wɔ wiase nyinaa. Ahaa, yɛaduru hɔ. Wɔato ɔfã yi din “Mmoa a Wɔde Ma Awarefo ne Awofo.” Sɛ wohwɛ saa asɛmti no ase a, wobɛhunu nsɛm ntiantiaa bi a ne nyinaa fa abusua asetena ho. Emu bi wɔ hɔ a w’ani gye ho?
Eric: Aane. “Sɛnea Wosiesie Ɔhaw Ahorow.” M’ani gye ɛno ho paa!
Ben: Ɛka nneɛma nnan bi a ɛbɛtumi aboa awarefoɔ ama wɔasiesie wɔn haw. Wo deɛ hwɛ saa nkyekyɛmu yi. Wobɛkenkan anaa?
Eric: Ok ma menkenkan. Ɛkenkan sɛ: “Nkitahodi yɛ ade titiriw wɔ aware mu, nanso ɔdɔ ne obu ho hia na ama nkitahodi akɔ so yiye.” Ei, m’ani agye nkyerɛkyerɛmu no ho paa.
Ben: Medaase ne akenkan. Wɔatwe adwene asi Bible mu asɛm bi so wɔ ha. Womia so a, ɛde wo bɛkɔ hɔ.
Eric: Ahaa, mahu. Efesofoɔ 5:33. Ɛka sɛ: “Mo ankorankoro no, mo mu biara nnɔ ne yere sɛ ne ho; na ɔyere deɛ, ɔnnya obuo kɛseɛ mma ne kunu.”
Ben: Wohyɛɛ no nso a, nea wɔresi so dua paa ne nea awarefoɔ no mu biara bɛnya afiri ne yɔnko hɔ. Ɛnte saa?
Eric: Mente aseɛ.
Ben: Wonnye nni sɛ ɔbarima biara pɛ sɛ ne yere bu no, na saa ara nso na ɔyere biara pɛ sɛ ɔhu sɛ ne kunu dɔ no?
Eric: Ɛno deɛ, me ne wo yɛ adwene paa.
Ben: Sɛ okunu taa yɛ nneɛma a ɛkyerɛ sɛ ɔdɔ ne yere a, wonnye nni sɛ ɛbɛyɛ mmerɛ ama ne yere sɛ ɔbɛbu no?
Eric: Ɛno mmom deɛ ɛyɛ nokorɛ.
Ben: Enti, ɛwom sɛ wɔtwerɛɛ Bible no bɛyɛ mfeɛ 2,000 a atwam ni deɛ, nanso emu asɛm baako pɛ a yɛasusu ho yi ma yɛhunu nea ɛsɛ sɛ okunu ne ɔyere yɛ na ama wɔanya anigyeɛ; sɛ wɔde afotuo no yɛ adwuma a ɛbɛma wɔn awareɛ asɔ.
Eric: Ei, sɛɛ nsɛm pii wɔ Bible mu a mennim.
Ben: Eric, ɛyɛ me dɛ sɛ woaka nokorɛ. M’ani bɛgye sɛ yɛbɛsan ahyia bio sɛnea ɛbɛyɛ a mɛhunu w’adwene wɔ asɛmti ketewa a ɛwɔ Wɛbsaet yi so no ho. Ɛno ne “Nneɛma Anan a Ɛboa Ma Wosiesie Ɔhaw.” *
Eric: M’ani bɛgye ho paa. Me ne me yere nyinaa bɛkɔ hɔ akɔkenkan.
Bible mu asɛm bi wɔ hɔ a ɛkyere w’adwene anaa? Yehowa Adansefoɔ nkyerɛkyerɛ ne wɔn som mu nneɛma bi wɔ hɔ a wopɛ sɛ wote ase yie? Sɛ saa a, berɛ biara a wobɛhyia Yehowa Danseni bi no, mma no nnha wo sɛ wobɛbisa no. N’ani bɛgye ho sɛ ɔne wo bɛbɔ saa asɛm no ho nkɔmmɔ.
^ nky. 43 Hwɛ Filipifoɔ 4:5.
^ nky. 63 Sɛ wopɛ ɛho nsɛm pii a, hwɛ nwoma a wɔato din Dɛn na Bible Kyerɛkyerɛ Ankasa? no ti 14. Yehowa Adansefoɔ na wɔtintimiiɛ.